.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: VLC Media Player
Audio and Video Player တွေထဲမှာတော့ VLC Media Player ကို ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ဒီ Player လေးက
Audio, Video ဖော်မက်မျိုးစုံကို အကုန်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ရ ၊ အသုံးပြုရတာလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ အရမ်းကို
အဆင်ပြေပါတယ်။ Video တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ Resolution အတိုင်း ဥပမာ 640x360 ဆို 640x360 နဲ့
တန်းပေါ်တယ်။ တစ်ချို့ Player တွေဆိုရင် သူ့ဆော့ဝဲလ်က ပုံသေဆိုဒ်တစ်ခု အတိုင်းပဲ ပေါ်တာများပါတယ်။ နောက်
ဒီ VLC Media Player က တစ်ခြား Player တွေထက် အသံ ၂ ဆလောက် ပိုပြီးကျယ်ပါတယ်။ အသံကိုလည်း 200%ထိ
ကျယ်လို့ရတယ်။ အဲဒါ ကွန်ပျူတာက Speaker ကို ကျယ်တာ မပါသေးပါဘူး။ အနော်ဆို Window Media Player နဲ့
သီချင်းတွေနားထောင်တာ အားမရလို့ ဒီ Player နဲ့ပဲ ဖွင့်ဖြစ်တာများတယ်။ အသံတိုးနေတဲ့ သီချင်းတွေ ဒီ Player နဲ့
နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အရင်ထက် ၂ ဆလောက်ပိုကျယ်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်သုံးကြည့်လိုက်ပါ ကြိုက်သွားမယ်။
ကဲ စိတ်ဝင်စားတယ် သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်လေးမှာ သွားဒေါင်းလိုက်ပါ။ 64-bit နဲ့ 32-bit ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
Download: VLC Media Player [ 64-bit ]
Download: VLC Media Player [ 32-bit ]
Download လင့်တွေကိုတော့ http://filehippo.com/ ကပဲ ချိတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် Upload တင်ဖို့က
လိုင်းသိပ်မကောင်းလို့ပါ၊ ဒေါင်းနည်းကတော့ အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်ကိုသွားပြီး အောက်မှာ မြားထိုးပြထားတာကို
နှိပ်ပြီး ဒေါင်းပါ။ အဲ ဆော့ဝဲလ်ကိုတော့ 64-bit နဲ့ 32-bit ကိုယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့ ကိုက်ညီတာ ရွေးပြီးဒေါင်းယူကြပါ။
ခုတော့ ကျွန်တော် Idiots ရဲ့ မငိုနဲ့တော့ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနားထောင်နေတာ ။ တော်တော်လေးကောင်းတယ် :)
Posted by Thurainlin at 10:58
Labels: Computer, Music, Player